यो स्थानीय निर्वाचन एक प्रकारको जनमत संग्रह हो : सन्तोष मेहता
प्रवक्ता, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल
० तेस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी कस्तो हुँदैछ ?
— राष्ट्रिय जनता पार्टीले दुई चरणको स्थानीय चुनाव र ६ वटा प्रदेशको निर्वाचन बहिस्कार गरिसकेको छ । त्यसबेला राजपा नेपाल आन्दोलनमै थियो । समय कम हुँदा पनि निर्वाचनमा सहभागि हुने निर्णय पार्टीले गरेको छ । हामी आन्दोलनमा भएको कारणले उम्मेदवारको तयारी पनि गरेको थिएन भने छ वटा पार्टी मिलेर बनेको पार्टी हो राजपा नेपाल । त्यसकारणले पनि उम्मेदवार छान्नु, प्रचारप्रसारको रणनीति बनाउनु यि सबै कुराहरूमा समस्या थियो । यद्यपी कम समयमा काम गरेको भएपनि एउटा कुरा के सत्य हो भने राजपा र मधेश भन्नु पर्यावाची शब्द हो । राष्ट्रिय जनता पार्टीको जित भनेको प्रदेश नं. २ को वा मधेशको जित हो । त्यसैले प्रदेश नं. २ मा राष्ट्रिय जनता पार्टी पहिलो हुने पार्टी हो ।
० तपाईहरूले दुई दुई चरणको निर्वाचन बहिस्कार गर्दा के पाउनुभयो ?
— हामी आन्दोलनमा थियौँ । जबसम्म संविधानमा भएका त्रुटिहरू हट्दैनन् तब सम्म हामी आन्दोलन गरिरहन्छौँ भनेर हामी आन्दोलनमा गएका थियौँ । हामी अहिले पनि आन्दोलमै छौं । हामी हातमा कालोपट्टि बाँधेर चुनावमा गएका छौं । आन्दोलन गरिरहँदा सरकारले संविधान संशोधनको विधेयक ल्यायो त्यो पूर्ण थिएन र त्यसमा हाम्रो सहमति पनि थिएन त्यसैले त्यो विधेयक फेल भयो । पछि हामीले त्यस परिणामलाई स्वीकारेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यौँ । हामीले सहमतिमा जाँदा मधेशीको माग त पुरा हुने थिएन तर पनि हामी खास गरी काँग्रेस र माओवादीसँग सहमति गरेर जुन विधेयक अगाडी सारेको थियो त्यसमा समर्थन गरेर त्यो विधेयकलाई संसदमा पास पनि भएको थिएन एमालेले सुरूदेखि नै विरूद्धमा रह्रयो र त्यो विधेयक असफल भयो । हामीले जुन आन्दोलन गरिरहेका थियौँ त्यसले एउटा कोर्ष पुरा गरेको छ । आन्दोलनमा भएका सम्बन्धित कुराहरू थियो त्यो सरकारले पुरा गर्ने निर्णय गर्यो । खासगरी संविधान संशोधनको विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गर्यो र यसैलाई आधार मानेर हामी निर्वाचनमा जान लागेका हौँ ।
० संविधान संशोधन नभई चुनावमा नजाने भनेर अडान लिएर बसेको राजपाले पछि निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्यो, राजपाका के कस्ता मागहरू पुरा भए र निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्यो ?
— माग पुरा गर्ने हैसियत सरकारसँग थिएन । केहि माग सरकारले पुरा पनि गर्यो तर हाम्रो प्रमुख माग भनेको संविधान संशोधन नै थियो । सरकारले प्रयास त गर्यो तर इमान्दारीपूर्वक प्रयास गरेको दखिएन, जसले गर्दा सफल हुन सकेन । त्यसमा एमालेले सुरूदेखि नै विरोध गरिरहेको थियो । त्यसले गर्दा आन्दोलन बाहेक अरू विकल्प हामीसँग थिएन । तर त्यो अवस्थामा संविधान अनुसार भैरहेको चुनावलाई स्वीकार गयौँ तर पहिलेको दुइटा चुनावलाई बहिस्कार गर्यौ । यसमा के भिन्नता छ भने पहिलो र दोस्रो निर्वाचन हुँदा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या थोरै थियो भने तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदा सम्म ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधान जुन मधेशको पक्षमा थिएन, त्यस संविधानलाई तिनै सांसदमध्ये ६० प्रतिशत भन्दा बढीले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने विचार आयो । यो नै हाम्रो जित हो । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अहिलेको संविधान अल्पमतले बनेको संविधान हो, बहुमतले बनेको संविधान होइन । अल्पमतको संविधान भएकोले यहाँ हाम्रो नीतिको जित भएको छ, इतिहासको हिसावले जित भएको छ, दस्तावेजको जित भएको छ । हामीले त्यतिबेलासम्म संविधान स्वीकार गरेनौँ जति बेलासम्म संसदले अल्पमतको संविधान भनेर स्वीकार गरेन । संसदले त्यसलाई अल्पमतले पारित गर्यो अनि हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ । संसदले संविधानको संशोधन गर्नुपर्दछ भन्ने ऐजेण्डाका साथ संविधानलाई स्वीकार गर्यो अनि हामी निर्वाचनमा सहभागी हुन भयौँ ।
० भनेपछि तपाईहरूले अहिले पनि संविधान मानेको अवस्था छ ? }
— हामीले अहिले पनि संविधान मानेका छैनौँ । हामीले त्यस्तो संविधानलाई मान्यौँ जुन संविधान अल्पमतले बनाएको संविधान हो, बहुमतले बनाएको होइन । संविधानमा त सबै गलत छैन । हामीले जुन कुरा भनिरहेका छौँ संविधान संशोधनको आवश्यकता छ, त्यो त बहुमतले मान्यो । बहुमतले मानेको हुनाले त्यस संविधान अन्र्तगत भैरहेको निर्वाचनमा मात्र भाग लिएको हो । निर्वाचन पछाडी हुने संविधान दिवसको दिन आधा देशले संविधान दिवस मनाउँला तर हामी कालो दिन नै मनाउनेछौँ ।
० तपाईहरूमाथि आरोप छ कि, तपाईहरूले मधेशलाई ८ जिल्लामा मात्र सीमित गर्नुभयो ?
— यो एकदम गलत छ, हामीले संविधान सभामा के भनेका छौँ भने तराई मधेशमा दुईवटा प्रदेश हुनु पर्दछ । हामी त्यसैको पक्षमा छौँ । हामी माथि आरोप लागेको होला, यही तराईका ८ जिल्लाका निर्वाचनमा मात्र किन सहभागी भयो ? यदी यस्तो आरोप हो भने यो आरोपको कुनै तुक छैन किनभने यो भन्दा पहिले त्यहाँ निर्वाचन सम्पन्न भैसकेको छ । त्यतिबेला हामी आन्दोलनमा थियौँ । अहिले हामीले आन्दोलनलाई स्थगित गरेर निर्वाचनमा गैरहेका छौँ । त्यसैले यो आरोपको कुनै तुक छैन । अहिले ८ जिल्लामा मात्र निर्वाचन भैरहेको छ र हामी त्यसैमा सहभागी भैरहेका छौँ ।
० पहिले फोरम नेपाल निर्वाचनमा जाँदा फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गद्दार भनेर आरोप लगाउनुभयो, अहिले तपाईहरू निर्वाचनमा जाँदा फोरम नेपालकै बाटोमा लुरूलुरू राजपा पनि आयो भनेर उपेन्द्र यादवजीले आरोप लगाउनुभएको छ नि ?
— उपेन्द्र यादवको बाटोमा लुरूलुरू राजपा गएको छैन । उपेन्द्र यादव त्यो बाटोमा हिड्यो, त्यो बेला हामीसँग आन्दोलनमा गएको भए हामीले जे सोचेका हुन्थ्यौँ, मधेशमा निर्वाचन बहिस्कार त्यो सम्भब हुन्थ्यो होला । तर हामी मध्ये नै हाम्रै आधा भाग निर्वाचनमा गए जसले गर्दा हामीले सोचेको जस्तो सम्भव हुन सकेन । त्यो सम्भव भएको भए एमाले पनि बाध्य भएर संविधान संशोधनको पक्षमा आउथ्यो होला ।
एमालेले गर्दा लामो समयसम्म बन्धक रहने अवस्था रहदैनथ्यो होला । तर उपेन्द्र यादवजीले मधेशी जनतासँग गद्दारी गरेर चुनावमा सहभागि हुनुभयो । जुन संविधानलाई पुर्नलेखन गर्नुपर्दछ भन्नुभयो, संशोधन गर्नुपर्दछ भन्नुभयो त्यही संविधान भित्रको निर्वाचनलाई अंगाल्नुभयो । हामी त्यस अवस्थामा निर्वाचनमा गयौँ, ६० प्रतिशत भन्दा बढी संसदले संशोधन गर्नुपर्दछ भन्ने मत आयो । जुन संसदले यो संविधान मधेशको हितमा छैन भन्यो तब मात्र हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौँ । उपेन्द्रजीको बाटोमा गएको होइन ।
उपेन्द्रजीको बाटो आत्मसमर्पणको बाटो थियो, मुद्दा बिर्सजनको बाटो थियो तर हाम्रो बाटो भनेको संविधान संशोधनको विधेयकलाई संसदमा लग्यौँ । त्यो इतिहासमा सधैभरी रहिरहनेछ । यो नै हाम्रो जित हो । हामी गणितीय हिसाबमा फेल भयौँ । हो, संविधान संशोधन हुनलाई दुइतिहाई मत पुग्नै पर्दछ । जबसम्म एमाले सहमतिमा आउँदैन त्यो मत पुग्न सक्दैन । हामीले एमालेलाई सहमतिमा ल्याउने धेरै कोशिस गर्यौँ तर एमाले मधेशको हित नै चाहदैन, मधेशको अलिकति पनि माया छैन ।
हामीले के बुझ्दै आयौँ भने एमाले सहमतिमा आउनेवाला छैन, एमालेलाई मधेशको माया छैन, वास्तवमा एमाले नश्लवादी पार्टी हो, ऊ एकल नश्लवादी राष्ट्र बनाउन चाहन्छ, ऊ त विखण्डनकारी पार्टी हो, ऊ मधेशलाई अलग गर्न चाहन्छ । हामीले के बुझौँ भन्दा जबसम्म हामी निर्वाचनमा सहभागी हुँदैनौँ तबसम्म यो संरचना परिवर्तन हुनेवाला छैन । यो संरचना परिवर्तन गर्न पनि संसद, प्रदेश र स्थानीय स्तरको चुनावमा सहभागि हुनुपर्दछ । अहिले यो परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । हामीले बुझेर नै निर्वाचनमा जान लागेका हौँ । यो निर्वाचन स्थानीय स्तरको देखिएपनि यो एक प्रकारको जनमतसंग्रह हो ।
० अबको निर्वाचनमा राजपा नेपालको कस्तो अवस्था हुनेछ ?
— राजपा नेपालले प्रदेश नं. २ मा प्रथम स्थान हासिल गर्नेछ । अरू निर्वाचनमा सहभागि नभएर जति क्षति बेहोरेका छौँ त्यसको क्षतिपूर्ति सहित प्रदेश नं. २ का जनताले मत दिएर त्यसको पूूर्ति हुनेछ । म यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, त्यो क्षतिपूर्ति सहितका सिटहरू हामीलाई प्राप्त हुनेछ । राजपा नेपालले प्रदेश नं. २ मा पहिलो स्थान मात्र होइन अत्याधिक मत ल्याउनेछ ।
० राजपा नेपालभित्र टिकट वितरणमा नै असन्तुष्टि देखिए कतिपयले त पार्टी नै छोड्नुभयो, यस्तो अवस्थामा कसरी पहिलो हुनुहुन्छ ?
— टिकट वितरणको समयमा केहि समस्या आए, त्यो स्वाभाविक पनि हो । विभिन्न ६ वटा पार्टी एकीकरण भएको हुनाले सबै साथिहरूलाई बुझ्ने अवसर पनि थिएन । टिकट वितरणको अवस्थामा केहि साथिहरू छुटे । ति साथिहरू धेरै योग्य पनि छन् । आगामीका दुईवटा चुनावमा उहाँहरूलाई समट्ने भन्ने कुरा पार्टीले विज्ञप्तिमा नै भनिसकेको छ ।
० पहिलो र दोस्रो चरणमा पहिलो स्थान हासिल गरेको एमालेले तेस्रो चरणको चुनावमा पनि पहिलो नै हुने दाबी गरेको छ, तेस्रो चरणको चुनावमा एमालेको कस्तो अवस्था छ ?
— एमालेको मधेशमा भोट माग्ने अलिकति पनि नैतिकता छैन, हैसियत पनि छैन र उसको आधार त गुमिसक्यो । एमालेको आधार पनि छैन फेरी किन यस्तो कुरा गरेको हो । मधेशमा कतिपय त यस्ता ठाउँ छन् कि पहिले एमालेको ५० प्रतिशत मत रहेको स्थानहरूमा अहिले उम्मेदवार उठ्ने मान्छेसमेत छैन त्यसैले एमाले कुनै पनि हालतमा प्रदेश नं. २ मा प्रथम हुन सक्दैन । यद्यपी कुनै कुनै साम्प्रदायिक बोकेका मानिसहरू छन्, त्यस्ता वडाहरूमा एमाले अगाडी आउन सक्छ तर मधेशमा फैलन सक्दैन ।
० ठूला दलका शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्ता प्रदेश नं. २ को चुनावलाई लिएर मधेश दौडाहामा छन्, तपाईहरूको ६ जना अध्यक्षमण्डलहरू को कहाँ के गर्दैछन् ?
— हाम्रो ६ जना अध्यक्षमण्डलदेखि सदस्यहरू सबै फिल्डमै हुनुहुन्छ । हाम्रा नेता राजेन्द्र महतो जनकपुरको कार्यक्रममा सहभागि हुनभयो । उहाँ निर्वाचन नसकिएसम्म मधेशमै हुनुहुन्छ । अनिल झा सिराहा, शरदसिंह भण्डारी महोत्तरी, महेन्द्र यादव सर्लाहीमा हुनुहुन्छ । नेताहरू मधेशका ८ वटै जिल्लाहरूमा निर्वाचनमा दौडाहा भैरहने अवस्था छ । सबै नेता आफ्नो पार्टीलाई जिताउने पक्षमा लागिरहनु भएको छ ।
० संविधान संशोधनको विधेयक असफल भैसकेपछि राजपा नेपालको अबको मुद्दा के हुनेछ ?
— एउटा भ्रम के सिर्जना भएको छ भने संविधान संशोधनको विधेयक फेल भएपछि राजपा नेपालको मुद्दा नै सकियो तर राजपा नेपालले संविधान संशोधनको लागि आन्दोलन जारी राख्नेछ । जबसम्म संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म राजपा नेपाल चुप लागेर बस्दैन । फेरि नयाँ विधेयक बन्छ । पहिलेको विधेयक हाम्रो अनुकूल थिएन अब बन्ने विधेयक मधेशी जनताले चाहेअनुसारको हुनेछ । मधेशी जनता एकजुट भएर आयो भने यो सम्भव पनि छ । मधशी जनताले हामीलाई मत दियो भने संविधान संशोधन सम्भव हुनेछ । एउटा अध्याय समाप्त भएको हो, हाम्रो मुद्दा नै सकिएको छैन । अबको विधेयकमा पहिला नपरेको बुँदालाई पनि समेटेर अगाडी लैजान्छौँ र संविधान संशोधन गराएरै छाड्नेछौँ ।